Nnyocha saịtị na Semalt Digital Agency
Ndị ọkachamara Semalt na-enye nhọrọ atọ maka mkpọsa SEO maka ndị ahịa — AutoSEO, FullSEO, na mkpọsa nchịkọta. Tupu mkpọsa ọ bụla, ọkachamara anyị SEO ga-enyocha ihe niile dị n'ịntanetị maka ntinye iwu nke njirisi web na nyocha SEO.
Mgbasa ozi AutoSEO na-enye nyocha nke elu nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka njikwa nyocha. Mgbasa ozi nke FullSEO gụnyere ọtụtụ nyocha iji nyere aka azụmaahịa ịzụlite ọnụnọ ya n'ịntanetị na obere oge. Ebee, Mgbasa Ozi nyocha na-enye nyocha dị elu nke weebụsaịtị onye ahịa.
N'oge mkpọsa nyocha, anyị na-enyocha weebụsaịtị nke onye ahịa ma soro ụlọ ọrụ gị na-ekwe nkwa inwe ihe ịga nke ọma n'ịntanetị. N'oge mkpọsa nyocha, nyocha SEO anyị ga-esoro ụlọ ọrụ gị na-eme ihe ọ bụla. Anyị na-enye akụkọ zuru oke na-atụle ọrụ ndị dị mkpa site na weebụsaịtị gị, yana ntinye iji bulie saịtị gị gaa na ntụpọ Google TOP.
Gini bu visibiliti websaịtị?
Anya a na-ahụ maka weebụsaịtị bụ usoro ịnweta websaịtị a na-achọ na ngwa igwe nchọta dịka Google. A na-ekpebi nhụta nke weebụsaịtị site na akụrụngwa kachasị nke saịtị dị na saịtị na-eduga ajụjụ dị mkpa; ngosipụta ugbu a nke na-ekpebi ọnụọgụ nke ngosipụta saịtị n'ime igwe inyocha ọchụchọ; na data niile dị n’ime weebụsaịtị wepụtara ka eme ya ka ọ bụrụ ọnọdụ nchọta.
A na-ekpebi ugboro ole a na-achọ ihe nchọta ihe site n’otu oge ndị ọrụ na-ajụ otu ajụjụ dị na injin nchọta. A na-agbakọ nke ọnụ ọgụgụ ngosipụta n'ime ọnwa enyere. Ọnọdụ dị na SERP bụ ahịrị otu weebụsaịtị nke weebụsaịtị ga-adaba mgbe a na-ahọrọ n'ime ajụjụ ahụ. Ọdịmma nke otu ọnọdụ dabere na akpọrọ "njupụta nlebara anya", nke na-egosi ahịrị peeji ngosipụta dị. A na-agbakọ oke a iji chọpụta ogo nke njikọ ahụ
Ndị ọkachamara SEO Semalt nwere ike inyere weebụsaịtị gị aka iwelie visibiliti nchọta ya. Mgbe anyị na-eme nyocha nke FullSEO nke saịtị, anyị na-ahọrọ ntụgharị ziri ezi nke ndegharị nke ọ dị mkpa ka emee. Maka ụfọdụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọnọdụ ha dị mkpa iji nyere aka nwekwuo ọhụụ saịtị ha. N'ihi ya, anyị na-ekwu banyere ọnọdụ ha na ha homepage. Ebe ọ dị, niche ndị ọzọ, ọmụmụ ihe karịrị akarị. Yabụ, anyị na-ewere ụzọ dị omimi iji meziwanye njirisi nyocha ha. Ozugbo nke a doro anya, ndị ọkachamara na Semalt ga-ahụ na ha were ụzọ kachasị mma iji nyere aka mee ka ọnụọgụ isi isiokwu dị na weebụsaịtị gị iji hụ na ọ na-aga nke ọma.
Mgbe gị na SEO na-arụ ọrụ, e nwere ihe ọmụmụ atọ dị mkpa:
Ugboro: Nke a na-egosi ugboro ole n’ọnwa ndị ọbịa na-abanye n’otu ahịrịokwu banye na ngalaba nchọchọ. Otutu ugboro, ka ndị mmadụ ga -enweta ihe enyemaka weebụ ọ bụ SERP kacha elu.
Ntughari bu onu ogugu nke onu ogugu web nke mere ihe di otutu na onu ogugu ha.
Ajuju ajuju putara na ego a gha acho iji banye na TOP maka okwu a.
Isi okwu na ugboro ole ha
A na-ekekarị ajụjụ onye ọrụ ajụjụ ụzọ atọ:
Ajuju di elu - nke kariri, nke ndi mmadu 5,000 na-eji ya. Mgbe ewu ewu di elu, mgbe ahụ nkwalite igodo dị irè, mana ọ chọrọ ọtụtụ ọrụ, ebe enwere ọtụtụ asọmpi.
Ajuju ndi di omimi - otutu ihe, ma ndi kariri karia ndi di elu. Ngosipụta oge: 1,000-5,000 ndị ọrụ kwa ọnwa.
Ajuju ndi di ala n’enweghi obere - nke kacha pere mpe (rue 1000 kwa onwa).
Nyocha na nhọrọ nke ahịrịokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ dị oke mkpa na nhazi nke nchịkọta akụkọ weebụsaịtị. Isi ihe ọmụmụ na-egosi mmadụ ole achọrọ ndị ọbịa nke ibe ha chọrọ ka ha banye na TOP. Nke a na - emetụta nkwadebe nke ọdịnaya. Ndị ọkachamara SEO anyị na-eji usoro algorithm egosipụtara iji nyere aka bulie weebụsaịtị. Isi peeji a di mkpirikpi wee chee ihu oge ajuju di elu. Akụkụ ndị bụ isi bụ maka obere oge na mpaghara nta na-eleba anya na ajụjụ ọchụchọ dị ala.
Nzọụkwụ nlele saịtị
Mgbe ị na-enyocha njikarịcha saịtị, ndị ọkachamara Semalt mata usoro ndị a:
Nyocha ederede SEO;
nyocha nke okporo ụzọ saịtị ahụ;
Nyochaa SEO nke ndị asọmpi;
nyocha SEO saịtị nyocha;
nyocha nke njikọ ndị dị na saịtị ahụ;
nyocha nke usoro ọmụmụ asụsụ nke weebụsaịtị.
Nyocha ederede SEO
N'oge nyocha ederede SEO, ndị ọkachamara anyị na-ekpebi ịdị mkpa nke ederede peeji nke dabere na isiokwu ndị ejiri iji kwalite saịtị ahụ na ngwa ọchụchọ. A na-eji nlezianya ahọrọ ederede ederede maka ajụjụ ọchụchọ tupu anyị ebido ịkwalite ọdịnaya. Anyị na-amalite site na iji nyocha pụrụ iche iji kọwaa ibe a buliri elu ma ọ bụ saịtị ahụ dum na nsonaazụ ọchụchọ TOP ndị ọzọ. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ji ogologo ederede ederede tụnyere ọnụ ọgụgụ nke okwu saịtị saịtị asọmpi nwere nnukwu anya. Nke a na - eme ka ndị ọkachamara mata ịma ogologo ederede ọ bụla kwesịrị ịdị. Mgbe, enweghị ụzọ isi ekwe nkwa nsonaazụ ọchụchọ TOP, site na ịhazigharị akara ndị dị n’etiti anyị ga-ebuli otu websaịtị SEO.
Site na nyocha nke isi okwu dị na ntanetị, anyị ga-enwe ike ịghọta nke ọma ugboro ole isi okwu dị mkpa na-apụta na ederede. Ọ bụrụ na ọnụọgụ a erughị ọkwa ahụ ezubere, aga-edegharị ederede. Mmadu aghaghi imezi ihe edere n’uche mmadu n’emeghi nyocha ihe di elu. Nchọpụta a na-eme ka saịtị TOP-10 pụta ìhè dịka ụfọdụ njirisi na nke a kwesịrị ịtụle oge niile mgbe ị na-ede ihe. Withrụ ọrụ site na ederede otu peeji ma jiri ya tụnyere ọdịnaya nke ndị asọmpi ga-enye gị ohere ịlele mkpa nke ibe enyere ma duzie nyocha SEO na ajụjụ gbara ajụjụ. Ihe ndị a niile na-enye ohere ọkachamara anyị ịnweta ozi gbasara otu esi eme ka ogo saịtị ahụ dị na nsonaazụ ọchụchọ Google ma nwekwuo ọhụhụ.
Nchịkọta okporo ụzọ weebụsaịtị
Nchịkọta okporo ụzọ weebụsaịtị na-enye gị ohere ịchọpụta otu esi ekesa okporo ụzọ na-abanye saịtị, yana ụzọ nke okporo ụzọ. N'oge usoro a, a na-enyocha okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị ndị asọmpi iji ghọta ahịa ahụ nke ọma. Maka ụdị njikọ a, a na-eji ọrụ pụrụ iche eme ihe. Nke a na-enyere anyị aka iwepụta ozi ndị a:
ọnụọgụ nke ndị ọbịa pụrụ iche;
ọnụọgụ nke nlele ihu akwụkwọ n'otu oge;
uzo isi uzo uzo (uzo, uzo, ndi ugwo, na ndi ozo).
Nyocha nke okporo ụzọ gaa na saịtị ahụ bụ ụzọ iji nyochaa okporo ụzọ nke ndị asọmpi.
Nyochaa SEO nke ndị asọmpi
Ọ bụ ezie na ịme nyocha SEO nke weebụsaịtị nke asọmpi bụ nnukwu ọrụ, ọ na-enye gị ohere ile anya n'azụ ebe asọmpi iji chọpụta:
ụzọ iji bulite ọdịnaya;
ugboro ole na ole ugboro saịtị na-ejikọ ndị asọmpi;
ihe ndị asọmpi nwere nke na-abụghị nke ụlọ ahịa ịntanetị gị;
mmejọ nke ndị asọmpi;
njehie na weebụsaịtị ndị asọmpi.
Iji saịtị gị tụnyere ndị na-asọmpi na-enye gị ohere ịghọta otu esi eme ka ogo saịtị gị dị elu. Ọkachamara Semalt ga-amụ ma nyochaa saịtị ndị asọmpi gị iji mụtakwuo banyere ahịa ahịa gị ma bulie ozi ahụ iji melite nsonaazụ ọchụchọ gị.
Nchịkwa nka na ntanetị
Nchịkọta ọrụaka nke otu websaịtị dị na ngalaba nke nyocha SEO miri emi. Ductmalite nyocha ọrụaka chọrọ ọtụtụ ahụmịhe na nkwalite webusaiti, nke ndị ọkachamara Semalt nwere. Akụkụ kachasị sie ike na nyocha nke teknụzụ bụ ịkọwa data. Nyocha nke ọrụ anyị na-ekpuchi mpaghara ndị a:
Nchoputa nke saiti n’ile gosiputara otutu peeji etinye aka na ihe ochicho Google. Ọ bụrụ na nchọta nchọta hụrụ peeji gị ugboro iri ise, ma ndị asọmpi nwere peeji 300, ebe nrụọrụ weebụ gị agaghị enwe ọkwá dị elu na nsonaazụ ọchụchọ maka mkpụrụedemede na-eme ugboro ugboro.
Nnyocha nke visibilụ saịtị gosipụtara igodo niile saịtị kwesịrị ibute ụzọ n'usoro nchọta. Nke a bụ ihe dị ike iji chọta ngwa ngwa ọhụụ iji kwalite ma chọpụta ibe ndị kachasị ewu ewu na ibe.
Nchịkọta isiokwu nke saịtị gụnyere ịnakọta data dị mkpa na saịtị asọmpi, mgbe emesịrị nyochaa ajụjụ ndị dị mkpa, nyochaa ya na ọmụmụ ihe, cluster, na mmejuputa.
Nchịkọta ibu ibu saịtị na-atụ ọsọ ọsọ nke saịtị, ma emesịa ya atụnyere saịtị ahụ site na ngosipụta TOP. Usoro a na - enyere gị aka ịchọta ibe nsogbu na saịtị gị.
Nchịkọta saịtị na- achọpụta nyocha njikọ nke ime nke saịtị. Igwe na-achọ ihe nwere ike ịchọpụta ibe saịtị ọzọ ma ọ bụrụ na ibe ndị ọzọ nwere akụ nwere otu ma ọ bụ saịtị nwere njikọ ya. N'ụfọdụ, njikọ ruru eru ezuru iji bulie saịtị na nyocha TOP.
Nnyocha nyocha nke saịtị dị mkpa mgbe achọrọ nkwalite ahụ na ajụjụ gbara oke. Ihe nke abuo maka nyocha zuru ezu nke isi peeji bụ ka ị ghọta nke ọma ka esi kesaa ịdị arọ nke ibe n'etiti ndị na-asọmpi gị. Ihe nke ato bu ichota nkwekorita nke ihe n’ile di elu na peeji nke ha di elu ma tinye atumatu ha n’ulo ahia gi.
Tụnyere meta meta saịtị gị asọmpi dị mkpa maka uto. A na-eme nke a site na iji crawler ma na-enye ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji chọpụta njehie na saịtị gị, ọdịnaya ndị na-enweghị ndebiri, ntụgharị na-ezighi ezi, na njikọ ndị mebiri emebi. Ọ bụrụ na mmadụ nyochaa meta meta na mkpado ọma na ụzọ ka zuo ezu karịa, enwere ike ịchọta ajụjụ gbara ajụjụ ugboro ugboro.
Nyocha nke njikọ ndị dị na saịtị ahụ
Mgbe anyị na-enyocha njikọ ndị dị na saịtị, anyị na-enweta ndepụta nke saịtị niile s na peeji ndị jikọtara weebụsaịtị gị, yana arịlịka maka oge a kara aka. A na-egosi nyocha a dịka otu ụdị akụkọ tebụl na eserese nke mmụba ọnụ ọgụgụ. Njikọ njikọ na mpụga azụ bụ isiokwu mkparịta ụka n'etiti SEO. N'oge a, enwere echiche na ọ nweghị njikọ njikọta nke ga - enyere aka ma ọ bụrụ na enweghị usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ na - agbasoghị iwu SEO.
Nyocha nke usoro ọmụmụ asụsụ ahụ
Ihe ndia bu:
guzobe isi akwukwo di nkpa;
ụyọkọ nke ajụjụ;
ntụle nke nsonaazụ yana usoro dị ugbu a.
Site na nyochaa usoro nchịkọta nke weebụsaịtị, ị ga-ewebata ibe gị niile n'usoro. Ọdịdị nke usoro ọmụmụ bụ usoro nke akwụkwọ ndekọ katalọgụ ndị nwere nghọta maka onye ọrụ na igwe ọchụchọ. Ugbu a, a na-etinye mkpụrụ edemede n'ime usoro ọmụmụ nke saịtị. Iji mee nyocha nke nhazi nke saịtị ahụ, nyocha nke nhazi nke saịtị ahụ, nyocha nke usoro ọmụmụ, yana nyocha nke mkpụrụ akwụkwọ n'ozuzu.